Eyga Goberian: Aakhirka Dahabka Dhameystirka Ah Husky Mix Tilmaamaha - Taranka
Eyga Goberian: Aakhirka Dahabka Dhameystirka Ah Husky Mix Tilmaamaha
Goberian waa magac caan ah oo loogu talagalay Dahabka Dahabiga ah ee Husky Mix.
Marka waxaad raadineysaa nooc leh wax yar oo qaniinyo ah ka macaanaa Dahablaha Dahabka ah? Waxaa laga yaabaa in wax aad u xiiso badan, sida Husky? Haddana weli eey saaxiibtinimo iyo isbarasho leh?
Goberian, oo leh daahirkooda Dahabka Dahabka ah iyo waalidiinta Siberian Husky, ayaa noqon kara ciyaarta ugu fiican. Laba nooc oo caan ah waxay isu yimaadeen si ay u soo saaraan canaan cayaareed oo jecel, hadana kulul.
Isku darkaani wuxuu leeyahay jaakad midab khafiif ah ka sameysan oo dahabi ah, oo leh dhago jilicsan, indho buluug ah oo jilicsan waxayna gaarayaan ku dhowaad 24 inji dherer Tilmaamaha milkiilahayagu wuxuu kaa qaadi doonaa shaqsiyadooda, dabeecadooda iyo shuruudaha daryeelkooda.
Macluumaadka Goberian & Soo Koobid
Ujeedo Wehelka Qoyska
Ku Haboon Qoysaska Tamarta Leh
Cabir Ragga dhererkoodu waa ilaa 24 'Dheddiguna waa ilaa 22'
Miisaanka Ragga ayaa miisaankoodu u dhexeeyaa 45 ilaa 80 rodol. Dumarku culeyskoodu waa 35 ilaa 70 rodol
Nolosha qofka 10 ilaa 15 sano
Kala duwanaanta Midabka Dahab leh dhogor madow ama midab khafiif ah
Dabeecad Dibad-bax, daacad ah, caqli badan, kalsooni leh, oo aad u firfircoon
Jimicsi Maalinle ah Sare - 60 daqiiqo maalintii socodka iyo socodka isku qasan waqtiga ciyaarta
Heerarka Waxqabadka Dhexdhexaad
Isticmaalka Cuntada Maalinlaha ah Laba ilaa seddex koob oo kibib tayo sare leh maalintii
Arimaha Caafimaadka ee Layaqaan Dysplasia iyo dhibaatooyinka indhaha
Dulmarka Eyga Goberian
Hawlgab Dahabi ah Husky Iskudar Shakhsiyadda iyo Dabeecadda
Sida Loo Daryeelo Goberian
Immisa ayuu cunaa Bilis hawlgab ah Husky?
Jimicsiga Hawl-gabe Dahab Ah Husky
Muuqaalka Goberian iyo Qurxinta
Kala-badh Dahab-dahab ah iyo badh Siberia Husky, Goberian ah ayaa adiga uun kuu noqon kara farxad kugu habboon.
Isku darka labadan caqliyeed ee caqliga leh waxay soo saartaa wehel aad u daacad ah oo ka bixi doona adiga iyo qoyskaaga.
Ujeeddada taranka Dahablaha ah ee Siberia Husky waxay ahayd in la horumariyo eey aad u caqli badan, kalsooni leh haddana u janjeedha qoyska.
Noocani eeyaha naqshadeeyaha ayaa markii ugu horeysay bilaabay inuu soo baxo horaantii 2000s, ilaa iyo markaas caan ku noqday .
Qashinka loogu talagalay eeygan naqshadeeye wuxuu u dhexeeyaa afar illaa lix, oo leh qiimo caadi ah oo u dhexeeya mid u dhexeeya $ 250 iyo $ 1500 USD.
Maaddaama ay tani tahay nooc isku dhafan, eey kasta oo qashin ku jira waxaa laga yaabaa inuu leeyahay astaamo u gaar ah, muuqaal iyo dabeecad ahaanba. Mid ka mid ah Dahablaha Dahabka ah ee Husky Mix Puppy wuxuu noqon karaa mid dahabi ah oo leh bunni madow ama indho indho jilicsan halka mid kalena uu yeelan karo indhahaas buluugga ah ee barafka leh kuwaas oo ah kuwa loogu jecel yahay dhammaan dadka jecel Husky.
The Golden Retriever Husky Mix waa nooc dhexdhexaad ah oo weyn. Lab iyo Dheddig Goberians-ka waxyar ayey ku kala duwan yihiin culeyskooda iyo dhererkooda:
Ragga ayaa kori kara ilaa 80 rodol oo istaagi doona 24 inji celcelis ahaan.
Marka la barbardhigo, haweeneydu waxay gaari kartaa qiyaastii 70 rodol iyadoo qaangaar ah waxayna istaagi doontaa wax yar oo ka yar 22 inji oo u engegaya.
Lab 55 ilaa 80 rodol 24 inji
Dheddig 45 illaa 70 rodol 22 inji
Marar dhif ah, oo laga yaabo inay qaali tahay, qiimaha Dahabka Hawl-gabka ah ee Husky Mix wuxuu u dhexeeyaa $ 250 illaa $ 1500 USD. Xusuusnow in tarankaani u muuqday sida ugu dhakhsaha badan horraantii 2000-meeyadii, sidaas darteed Dahablaha Hawl-gabka Dahabiga ah ee Husky Mix khiyaano ayey noqon kartaa si aad u hesho nasasho oo waqtigaaga u qaado raadinta abuur wanaagsan. Haddii kale waad sahamin kartaa Eeyaha Goberian ee korsashada .
Goberian caadi ahaan wuxuu noolaadaa ugu yaraan 10 ilaa 15 sano. Ilaa iyo inta aad ka buuxineysid jimicsigaaga, cunnooyinkaaga iyo shuruudahaaga caafimaad ka dib ardaygaagu wuu horumari doonaa sanado badan.
Isku-darka Dahabiga ah ee Husky isku-darka wuxuu ku xiran yahay inuu noqdo mid bulsheed! Eygan wuxuu jecel yahay dadka iyo dareenka. Dibad-bax, geesinnimo iyo kalsooni leh. Saddex erey oo sifiican loogu sharraxayo tan ayaa dhalisa u janjeedha bulshada.
Bar ilmahaaga akhlaaqda saxda ah laga soo bilaabo da'da yar waxayna la falgalaan asxaabtaada iyo qoyskaaga hab cadaawo-cuncun leh ! Noocani sidoo kale wuxuu ku wanaagsan yahay carruurta sababo la xiriira shaqsiyadooda firfircoon iyo ciyaarista. Si kastaba ha noqotee, isha ku hay dhallaankaaga carruurta yaryar maadaama ay si fudud ugu xanaaqi karaan.
Caadi ahaan, a Husky mix breed waxay noqon kartaa mid aad u xoog badan oo ka ilaaliya milkiilahooda. Si kastaba ha noqotee, iyagu waa nooc aad u saaxiibtinimo leh oo aan ku habboonayn inay noqdaan eey ilaaliya. Iyagu waa nooc aad u jecel oo jacayl kugu ridi doona haddii aad u oggolaato.
Waa lagama maarmaan in waqti iyo tamar badan la bixiyo si loo buuxiyo tamartooda iyo shuruudaha tababarka. Goberianku waa mid firfircoon oo ciyaar badan jecelna ficil sidaas darteed waa lagama maarmaan in adiga ama xubnaha qoyskaaga ay awoodaan inaad siisaan ardaygaaga jimicsi joogto ah.
Noocani wuxuu jecel yahay xiisaha, iyaga oo ka dhigaya lammaanaha ku habboon dembiga safar kasta oo safar ah
Daarad weyn ayaa waxyaalo yaab leh ku samayn doonta eygan. Isku darkaani kuma habboona ku noolaanshaha guryaha dabaqyada yar yar wuxuuna u baahan yahay meel fara badan oo lagu gubo tamarta iyo si aysan u dhicin dhaqan burburin, sida qayilaadda , dhacdaa.
Haddii aan si sax ah loo tababarin ama la siinin dhiirigelin maskaxeed oo ku filan, tarankaani wuxuu noqon karaa mid wax dumiya sidaas darteedna waxaa lagama maarmaan ah inaad xiriir wanaagsan la yeelatid eygaaga si iska ilaali arrimaha dhaqanka noocaas ah .
Ahaanshaha firfircoon, dhexdhexaad ilaa baaxad weyn, eeygan wuxuu u baahan doonaa socod badan.
Goberian-kaaga wuxuu u baahan doonaa cunto hodan ku ah borotiin tayo sare leh (qiyaastii 20% cuntadooda waa inay noqdaan borotiin) dabeecaddooda firfircoon awgeed. Celcelis ahaan, ardaygaagu waa inuu helaa laba iyo badh illaa saddex koob oo ah kibble qalalan oo tayo sare leh maalintii.
Waa lagugula talinayaa inaad quudiso Dahabkaaga Hawl-gabka ah ee Husky iskudhaf kibble tayo sare leh oo ku takhasusay nooc firfircoon oo firfircoon. Tani waxay hubin doontaa in dhammaan shuruudaha nafaqadooda la buuxiyo si ay u sii wadaan firfircoonaan, farxad iyo horumar.
Noocani wuxuu u baahan yahay qiyaastii 1,500 oo kaloori maalintii oo ay tahay in la siiyo laba jeer maalintii. Si kastaba ha noqotee, tani way ku kala duwanaan kartaa jawaabta kala duwanaanta cabbirka, dhererka, dhaqdhaqaaqa iyo dabeecadda.
Eeyadan ayaa jecel cimilada qabow.
Ka noqoshada firfircoonida eygan maahan fikrad wanaagsan. Haddii aad xiiseyneyso eeyaha 'Goberian Puppy', ka dibna u diyaarso si aad u hesho taam!
Waad ku mahadsan tahay waalidkood Husky, oo caan ku ah xooggooda daadinta, oo lagu qasay waalidkood Dahabka Dahabka ah, ee loo yaqaan ... dib u soo celinta, Eygan wuxuu jeclaan doonaa layli kasta; shaqada ayaa ku jirta dhiigooda .
Socod fiican, ama xitaa socod, ugu yaraan laba jeer maalintii ayaa laga doorbidayaa noocyadan. Kaliya maahan jimicsiga inuu cunuggaaga taam noqon doono laakiin sidoo kale wuxuu yareyn doonaa fursadda caajis aan loo baahnayn taasoo u horseedi karta dabeecado waxyeello u geysta noocaas firfircoon.
Uguyaraan, ku dar isku darkaaga 60 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii. Ha iloobin inaad tan ku beddelato waqtiga socodka, waqtiga socodka, iyo dabcan waqtiga ciyaarta.
Hubso inaadan jimicsiga ka badin inta ay bislaanayaan; ilaa laba sano jirka ah hubi inaad raacayso tilmaamaha socodka, sidaas adiguna , ama Eygaaga uusan dhaawacmin.
Goberian-ku wuxuu hubaal ku habboon yahay qaab nololeedka firfircoon wuxuuna ka dhigayaa wehelka ugu fiican orodyahan kasta ama socodka. Haddii tani aysan u ekaanayn adiga markaa hubaal ka fiirso nooc jilicsan oo dabacsan sida a Xamuul .
U hubso inaad jimicsiga sii wadatid, laakiin, ka taxaddar ilmahaaga inuu kuleylka dhaafi waayo! Iskuday inaad qaboojiso oo leh daawo lagu qaboojiyo socod dheer oo xagaaga ah kadib.
Qurux badan hadana waxyar dhaban. Tababbarku waa lagama maarmaan noocyadan. Dabeecaddooda khaldan ee Husky darteed, hubi inaad waqtigaaga ku bixisid siinta Goberian-kaaga kulanno tababar oo sax ah.
Xeerka guud ee suulka tababarka canine waa adeegsiga joogtada ah ee xoojinta togan oo lagu lammaaneeyay waqtigaaga iyo sabirkaaga. Noocani wuxuu noqon karaa mid xoogaa madax adag sidaa darteed raadso talooyinka tababarka saxda ah hana ka baqin inaad weydiisato caawimaad tababaraha eyga xirfad leh.
Shuruudaha Bulsheed & Kicinta Maskaxda
Bulsheynta ayaa muhiim u ah dhammaan eyda oo dhan waana inay bilaabataa sida ugu dhakhsaha badan.
Tani waxay ilmahaaga siineysaa isdhexgal wanaagsan oo u dhexeeya dadka cusub, eeyaha kale, iyo xitaa xayawaannada kale. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo aad ku siin karto ardaygaaga shuruudaha lagama maarmaanka u ah bulshada ee ay u baahan tahay inay si guul leh ugu korto eey weyn oo kalsooni leh oo baxaysa:
Safarada Beerta Eyga
Markasta oo eeygaagu la kulmo shakhsiyaad cusub, dhacdooyin, goobo iyo codad aad u yar u nugul welwelka laga yaabo inay noqdaan. Marka laga hadlayo xayawaanka kale, hubi inaad bilowdo isbarasho da 'yar. Ku bilow isbarasho tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sii fadhiyada
Bulsheynta ayaa fure u ah kicinta maskaxda ee caafimaadka leh eeyaha oo dhan. Kicinta maskaxda waxaa lagu buuxin karaa siyaabo badan, laakiin, waxa ugu fiican waa waqtiga ciyaarta.
Waqtiga ciyaarta wuxuu ku fiican yahay welbahaaga eyga iyo caafimaadka maskaxda waana shaki la'aan inuu faa'iido u leeyahay c ku celcelinta dammaanadda-eeyga .
Iyagu waa nooc firfircoon oo jecel kalgacalka jacaylka orodka, xusuusnow hidaha eyga jilicsan, sidaas darteed, ciyaar ku saleysan orod ayaa qumman.
Sidee Loogu Ciyaaraa Eygaaga
Iibso kubbadda eyga saaxiibtinimo u leh
Kubbadda tuur oo dhah “keen”
U fiirso sida eygaagu u ordayo kubbada
Rajayn oo ku ducee in eeygaagu kubbada soo celiyo!
Keenista waxay kujirtaa adkeysiga socodsiinta iyo sidoo kale isku xirnaanshaha iyo xoojinta.
Barashada soo qaadashada ayaa laga yaabaa inay wakhti ku qaadato ilmahaaga yar sidaa darteed ha la yaabin haddii aysan kubbada dib u soo celin isla markiiba laakiin ha ka welwelin, waxay si dhakhso leh u baran doonaan.
Saadaalinta hiddo-wadaha waxaa lagu qeexay inay tahay kororka suurtagalnimada astaamo gaar ah (kiiska Dahabka ah ee Husky, cudur) sababo la xiriira hiddo-wadaha.
Canine Hip Dysplasia (CHD) waa astaamo hidde ah, oo laga helo daahirka Golden Retriever iyo noocyada Husky, sidaa darteed ka tagista isku dhafkan u nugul cudur ka hortagaya sameynta saxda ah ee sinta misigta. Tani waxay sababi kartaa curyaannimo iyo xanuun daran.
Husky wuxuu u nugul yahay dhibaatooyinka indhaha sida sameynta araga indhaha. Indho-beelku waa 'daruur indhaha muraayadaha indhaha' sidaas darteedna waxay u horseedi kartaa aragga inuu xumaado muddo ka dib. Tani waxay ka dhigi kartaa ardaygaaga inuu umuuqdo mid jahwareersan oo wareersan.
Booqashooyinka caafimaadka xoolaha ee joogtada ahi waa lama huraan si aan arrin caafimaad looga baarin oo aan hore loo soo qaban, si aan u saameyn tayada nolosha cunuggaaga.
The Golden Retriever Husky Mix waa ey aad u soo jiidasho badan. Waxay leeyihiin jaakad laba jibbaaran (sida waalidkood) oo leh dhogor dherer dhexdhexaad ah ama dheer ah. Koodhku waa midab dahabi ah oo xoog leh laakiin wuxuu leeyahay midab kala duwan oo dahab ah ama xitaa midabbo madow iyo caddaan ah (oo u eg waalidkood Husky). Midabka jaakadda saxda ah wuu kala duwanaan doonaa iyadoo loo eegayo xaaladdooda noocyo isku dhafan.
Badankood eeydan yaryar waxay leeyihiin dhago jilicsan oo jilicsan, iyagoo fiirinaya wax badan sida waalidkood oo kale oo ka yar sida dhagaha jilicsan ee Husky; isku mid waa run dabadooda cirifka ah.
Jidhka Goberian-ku waa jimicsi iyo geesinimo. Waxay miisaanka ka qaadi karaan meel kasta oo u dhexeeya 45 lbs ilaa 80 lbs iyagoo ah qof weyn oo si buuxda u koray, oo istaaga hareeraha 22 ilaa 24 inji oo dherer ah iyaga oo ka dhigaya dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Ka soo horjeedda caqiidada caanka ah, labbiska labadoodaba ma daadiyo ku dhowaad sida ugu badan ee waalidkood Husky. Isku darka Dahabiga ah ee 'Retriever Husky' kuma sarreeyo liiska shuruudaha hagaajinta. Inta badan daryeelka noocyadan isku dhafan waxaa lagu maalgeliyaa tababbarkooda iyo jimicsigooda. Si kastaba ha noqotee, shuruudaha aasaasiga ah ee qurxinta, ayaa looga baahan yahay eeyaha oo dhan:
Nadiifinta Toddobaadlaha ah iyo Qurxinta
Nadiifinta Ilkaha Toddobaadlaha ah
Maydhashada Billaha ah
Xoqida ciddiyaha (sida loogu baahdo)
Cadayashada joogtada ah ee isku darkaaga naqshadeeye waxay hubin doontaa in jaakadooda dhererkooda dhexdhexaad ilaa dhaadheer ay ka fogaanayaan matti aan loo baahnayn iyo wasakh . Qubeyska iyo jarista ciddiyaha ee ku saleysan baahida loo qabo.
Si looga fogaado booqashada ilkaha ee aan loo baahnayn ee dhakhtarka xoolaha, daryeelka ilkaha sidoo kale waa in aan la iska indhatirin. Cadayashada ilkuhu waa ikhtiyaarka ugu fiican ee daryeelka ilkaha eeyga. Si kastaba ha noqotee, tani way yara adkaan kartaa haddii aan hore loo soo bandhigin, markaa waxaa laga yaabaa inaad doorbido daaweynta ilkaha eey.
Gallery Sawirka Goberian
Goberian ku ciyaaraya jawi qabow, eeyahaani waxay jecel yihiin cimilada qabow.
Ma diyaar tahay kabahaaga orodka Ma tihiin qoys firfircoon ama shaqsi leh daarad sagxad macquul ah?
Haddii aad raadineyso eey jecel, oo labalaabi kara lammaane ordaya ama socdaal ku tagaya, iyo haddii aad waqti iyo dadaal u hayso kor u qaadista eey tamar sare leh, markaa Goberian waa eey ay tahay inaad tixgeliso. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad wax ka barato Walaalkood, Shepsky a Adhijir Jarmal Husky qas.
Su'aalaha ugu sareeya ee ku saabsan Shih Poo
12 Xaqiiqooyin Cute Kuwa Leh Milkiileyaasha Cusub Waa Inay Ka Ogaadaan Cirbadaha!
maxaa looga jeedaa marka ay dhegta eeydu kululaato
Eey xoog leh magacyo adhijir Jarmal ah
Jarmal Shepherd/rottweiler mix
madow iyo caddaan Jarmal adhijir ah